रोचक – Online BudhaNilkantha
यी सुन्दरी युवतीले कुकुरसँग नि*यमित यस्तो गर्न थालेपछि…
काठमाडौ । विश्वका कुनै–कुनै घटना अत्यन्तै अपत्यारिला छन् । अहिले फेरी सुन्दर देखिन एउटी युवतीले गरेको हर्कत चर्चामा छ । हुन छ युवतीहरु आफ्नो सुन्दरताको लागि केसम्म गर्लान्रु डाइटिङ गर्लान्, महँगो सामान प्रयोग गर्लान्। यी त सामान्य भए। तर अमेरिकाकी एक युवतीले सुन्दर देखिनको लागि कुकुरको पिसाब पिउने गर्छिन्। राम्री देखिनको लागि आफूले दैनिक कुकुरको पिसाब पिउने गरेको उनले बताएकी छिन्। लिन नाम गरेकी ती सुन्दरीलाई लामो समयदेखि धेरैजनाले उनको सुन्दरताको कारण सोधिरहेका थिए। त्यसको जवाफमा उनले आफूले दैनिक रुपमा कुकुरको पिसाब पिउने गरेको बताइन्। यसको प्रयोगले पिम्पलहरु नआउने र स्किनलाई चम्किलो राख्ने उनले बताइन्। लिनले पार्कमा लगेर कुकुरलाई पिसाब गराउने र त्यो जम्मा गरेर पिउने गरेकाृे बताइन्। अनुहार चम्किलो बनाउनको लागि उनले सधैँ आफ्नो कुकुरको एक कप पिसाब पिउने गर्छिन्। उनी भन्छिन, ‘कुकुरको पिसा
काठमाडौ । विश्वभर महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले हाम्राबीचमा धेरै कुराहरु कुराहरु ल्याएर आएको छ । यो के हो ? कसरी फैलन्छ ? रोकथाम गर्न के गर्ने ? यी अत्यन्तै महत्वपुर्ण प्रश्नहरु हुन् । किनभने मान्छेहरु आ–आफ्नै तरिकाले यी र यस्तै प्रश्नहको जवाफ दिदैंछन् । सामान्य रुपमा हेर्दा अहिले कोरोना भाइरस एक प्राकृतिक महामारी भएको बताइन्छ । तर यसमा सबैजना सहमत छैनन् । धेरैलाई लाग्छ कि यो त मान्छेहरुले बनाएको जैविक भाइरस हो । अहिलेसम्म हात मिलाउँदा, कसैसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा, वा थुकको छिट्टाबाट पनि कोरोनाभाइरस फैलने डर हुन्छ । कतिपयले यो भाइरस कपडा, लगायत अन्य माध्यमबाट पनि सर्छ भन्दै आएका छन् । माक्स, लगाउँने, एक्लै बस्ने र आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भन्नेजस्ता तमाम कुराहरु रहेका छन् । सायद यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपालका एकजना सांसदले महले कोरोनालाई भगाउन सकिन्छ भ
काठमाडौं । के हुन्छ जब आफ्नै श्रीमानलाई अरु कसैसँग रमाइलो गरिरहेको अवस्थामा फेला पार्छिन ? यस्तै एक घटना अहिले बाहिर आएको छ । बा’लिकालाई क’रणी गर्दागर्दै पत्‍नीले बाहिरबाट चुक्कुल लगाइदिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । एकाबिहानै परिवारका सबै सदस्य खेतमा काम गर्न निस्किए । सबै जना काममा व्यस्त रहे । तर, सबै काममा गए पनि मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–४ का ३९ वर्षीय तोमकुमार लिम्बू भने घरमै बसेका थिए । घरमा परिवारका सदस्य कोही पनि नभएको मौका छोप्दै उनले बुधबार बिहान स्थानीय १५ वर्षीया बा’लिकालाई ललाईफकाई बिहान ८ बजेतिर आफ्नै घरमा बोलाएका थिए । प्रहरीका अनुसार बा’लिकालाई बोलाएपछि घरमा आइपुगेकी बा’लिकालाई लिम्बूले कोठाभित्र लगेर ढोका थुनेर क’रणी गर्न थालेका थिए । श्रीमान कोठामा बा’लिकामाथि क’रणी गर्दै थिए त्यत्तिकैमा उनकी पत्नी पनि घरमा आइपुगिन् । कोठाभित्र बा’लिकालाई राखेर पतिले गलत हर्कत गरिरहे
आज शुक्रबार । हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले आजको दिन शुक्रका साथै सन्तोषी माता र वैभवलक्ष्मीको पूजाआराधना गर्दछन् । साथै यस दिनमा लक्ष्मी माताका अवतार अन्नपूर्णेश्वरी माता र दुर्गा भवानीको पनि पूजा गरिन्छ । माता लक्ष्मीको व्रत बसी विधिवत रुपमा पूजा आराधना गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । जसले जीवनभर तपाईंको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यो दिन व्रत लिने व्यक्तिले फलाहारका रुपमा चना र सख्खर प्रयोग गर्नु उत्तम हुनेछ । व्रतमा अमिलो खानु ठूलो त्रुटी हुनेछ । साथै यस दिनमा लक्ष्मी माताका अवतार अन्नपूर्णेश्वरी माता र दुर्गा भवानीको पनि पूजा गरिन्छ । धार्मिक रुपमा शुक्रबार तीन किसिमको व्रत तथा पूजा गरिन्छ । यीनीहरुको व्रत विधि भने अलग-अलग हुन्छन् । यो दिन सेतो कपडा लगाउनु पर्छ । शुक्रबार घरमा खीर बनाएर गरिबलाई बाँड्नाले घरको भण्डार भरिने विश्वास छ । शुक्रबारको दिन सन्तोषी माताको व्रत बस्ने प
पिपल बहुउपयोगी वनस्पति हो । सबैभन्दा धेरै अक्सिजन उत्पादन गर्ने पिपल वैज्ञानिक रुपमा जति उपयोगी मानिन्छ धार्मिक रुपमा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । अथर्ववेदको उपवेद आयुर्वेदमा पनि धेरै रोगको उपचार गर्न पिपल उपयोगी हुने वर्णन गरिएको छ । औषधीय गुणहरुको कारणले पिपलको रुखलाई ‘कपवृक्ष’ भनिन्छ । यसको बोक्रा, पात, फलफुल, बीउ आदी सबै पिपलको तत्वहरु सबै प्रकारका बिरामीको लागि उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हिन्दु धर्ममा पिपललाई अमृततुल्य मानिएको छ । यसमा धेरै अक्सिजना हुने हुनाले प्राणवायुको भण्डारण भन्ने पनि गरिन्छ । पिपलको पातलाई सिरानमुनि राखेर सुत्दा अक्सिजनाको कमी नहुने विश्वास गरिन्छ । पिपलको छायाँमा स्वस्थ अक्सिजन प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले वातावरणलाई सन्तुलनमा राखि मानसिक शान्ति पनि दिन्छ । स्कन्द पुराणमा वर्णन गरिए अनुसार पिपलको रुखमा सबै भगवानहरु वास बस्छन् । हरेक मंगलबार पिपलको रु
काठमाडौं– देवता मध्येका सबैभन्दा धनी देवताको रुपमा कुबेरलाई लिइन्छ । कुबेरको पूजा तथा उपसना गरेमा धन लाभ हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ । तपाई धन आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ भने भगवान कुबेरलाई खुसी पार्नु जरुरी रहन्छ । कुबेरको पूजा गर्नका लागि सवैभन्दा उत्तम बारका रुपमा शुक्रबार मानिन्छ । कुबेर यन्त्रः तामाको एक प्लेटबाट कुबेर यन्त्र बनेको हुन्छ । त्यो नै कुबेर यन्त्र हो । जीवनमा सुखी, सम्पन्न र ऐश्वर्या प्राप्त गर्नको लागि कुबेर ७२ अंकलाई शुभ मानिन्छ । यस्तो यन्त्रलाई आफ्नो घर, अफिस तथा पसलहरुमा राख्न सकिन्छ । ख्याल राख्नुपर्ने कुराः कुबेर यन्त्र हरेक पटक आफ्नो आँखाले देख्ने गरी राख्नुपर्छ । यसको मुख उत्तर वा पूर्वी दिशामा फर्काएर राख्ने गर्नुपर्छ । हरेक बिहान पुजा गर्दा सुगन्धित धुप बाल्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा घरमा सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्छ र नकारात्मक उर्जा हटेर जान्छ
हिन्दूधर्मअनुसार मंगलबार विशेष गरी गणेश भगवानको पूजाआराधना गरिन्छ । यस दिन काली माता, दुर्गा माता र हनुमानको पनि पूजा गरिन्छ । यस दिन व्रत बस्दा बिहानको खाना खानु हुँदैन भने साँझको खानामा नुन मिसाउनु हुँदैन । सबै किसिमको सुख प्राप्त गर्न, रक्तविकार शमन गर्न, शत्रु दमनका निम्ति, स्वास्थ्य रक्षार्थ तथा पुत्र प्राप्तिका लागि मंगलबारको व्रत उत्तम मानिन्छ । यो व्रत शुक्ल पक्षको पहिलो मंगलबारबाट शुरु गर्नु राम्रो मानिन्छ । यो व्रत कम्तिमा २१ वटा मंगलबारसम्म लिने प्रचलन छ भने सकेसम्म जीवनभरी नै लिए अझ राम्रो हुन्छ । मंगलबारको व्रतमा गहुँ र सख्खरको भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ भने रातो कपडा धारण गर्नु पर्छ । मंगलबारको व्रतबाट मंगल ग्रहको अनिष्ट फल पनि शान्त हुन्छ । मंगलबार गणेश भगवानको आराधना गर्दा ‘ॐ भौमाय नमः’ मन्त्रसहित जप गर्नुपर्दछ । पूजा गर्दा रातो फूल, फल, तामा, नरिवल आदि फल दान गर्नुपर्दछ ।
काठमाडौं। आज मंगलबार, हिन्दु बैदिक ज्योतिषशास्त्र अनुसार ग्रहका आधारमा बार र तिथिहरुलाई विभाजन गरिएको हुन्छ । शास्त्रका अनुसार मंगलबार तथा शनिबार क्रुर अर्थात पापी बारको श्रेणीमा पर्छन् । मंगलबारलाई अत्याधिक क्रुरबार मान्दै शास्त्रमा यसलाई शरीरमा रक्त सञ्चार गराउने धमनीसँग सम्बन्धित मानिएको छ मानिसको शरीरमा हुने रातो पदार्थ मंगलसँग सम्बन्धित मानिन्छ । मंगलबारलाई सबै ग्रह मध्ये क्रुर र रक्तपातको ग्रह मानिएको छ । मंगलको रातो रंग मृत्यु वा रगत सँग हुन्छ । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न ३ काम गर्नै नहुने अर्थात बर्जित गरिएको छ । यी काम मंगलबार गर्दा तपाइँको जीवनमा समस्या बढ्न सक्छन् । माछा, मासु सेवन नगर्नेः मंगलबारको दिन तपाईले माछा नखाएकै राम्रो हुन्छ । आजको दिन माछा सेवन गर्दा आर्थिक नोक्सा हुन सक्छ भने मंगलबार मासु खाँदा पनि कुटुम्बको क्षय हुन्छ । पशु पन्छीको ब
वास्तुशास्त्रअनुसार कुनै बस्तु घरमा वा व्यापार व्यवसाय गर्ने ठाउमा राख्दा नफाप्ने हुन्छ। यी ६ चिज तपाइको घरमा वा व्यापार गर्ने ठाउँमा छ भने तुरुन्त हटाईहाल्नुहोस्। यी चिजहरु घरमा राख्दा आर्थिक समस्याबाट कहिले मुक्ति पाउन सक्दैन। हरेक दिन कुनै न कुनै समस्याले घेरीरहन्छ।ति ६ चिज के-के हुन् त आउनुहोस जानीराखौ १ नटराजको मुर्ति : नटराजको मुर्तिमा भगवान शिव ताण्डव नृत्यको रुपमा हुनु हुन्छ । जुन विनाशको सूचक मानिन्छ । त्यसैले घरमा राख्नु अशुभ मानिन्छ । २ ताजमहलको तस्बिर : ताजमहल सुन्दर हुनुको साथ – साथै चिहान पनि हो । ताजमहल मृत्युसंग जोडिएको छ त्यसैले यस्को तस्बिर वा प्रतिक घरमा राख्नु हुदैन । ३ डुब्न लागेको जहाज : पानीमा डुब्न लागेको जुन सुकै बस्तु वास्तुशास्त्रअनुसार अशुभ मानिन्छ । घर सजाउन राखिएको पानीजहाजको तस्बिर तपाइको घरको सोभा बढाउनुको सट्टा घट्न सक्छ। आर्थिक समस्या आउन सक्छ त्य
भनिन्छ दिनको शुरुवात राम्रो भो भने दिन नै राम्रो हुन्छ । त्यसैले विहान दिनभरलाई फाइदा पुग्ने चिजको मात्र दर्शन गर्नु पर्ने शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । शास्त्रमा यस्ता कुरा उल्लेख छन् जुन कुरा विहान उठ्ने वित्तिकै देखियो भने शुभ र अशुभ हुन्छ । १ श्रृंगार गरेकी स्त्री= विहान उठ्ने वित्तिकै श्रृंगार गरेकी महिला देखियो भने दिन शुभ हुन्छ । घरमा उठ्दा रातो बस्त्र लगाएकी स्त्री देख्नु पनि शुभ हुने संकेत हो । तपाइँलाई लाभ मिल्न सक्छ । २ धर्मग्रन्थ= विहान उठ्ने वित्तिकै धर्मग्रन्थ देखियो भने राम्रो हुन्छ । कुनै धर्मग्रन्थ अध्यन गरिरहेको वा बाचन गरिरहेको ब्यक्तिलाई उठ्ने वित्तिकै देखियो भने पनि दिन शुभ हुन्छ । ३ गाई= विहान उठ्ने वित्तिकै गाई देखियो भने दिन शुभ हुन्छ । गाइको आवाज कानमा परेर विउँझिनु झनै राम्रो मानिन्छ । विहानमा कालो रंगको गाई देखिनु त झनै राम्रो हो । ४ आगो=वि